Arthritis (အဆစ်ရောင်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Arthritis (အဆစ်ရောင်ရောဂါ)
Arthritis (အဆစ်ရောင်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
ဒီ အဆစ်ရောင်ရောဂါဟာ အဆစ်၂ခုကြား မှာရှိသည့် အရိုးနုရောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှားရခက်ခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်းတို့ကို ခံစားရစေပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေမှာ အရိုးနုတွေမရှိဘဲ အရိုးအချင်းချင်း ပွတ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး အရိုးပုံပျက်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအဆစ်ရောင်ရောဂါကို တွေ့ရများသည့် နေရာများမှာ လက်ဆစ်၊ ကျောရိုးဆစ်၊ ဒူးဆစ်၊ ပေါင်ထိပ်ရှိ အဆစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆစ်ရောင်ရောဂါဟာ သက်လတ်ပိုင်းအမျိုးသားတွေမှာ တွေ့ရများပြီး အထူးသဖြင့် အသက်၄၀ကျော်အမျိုးသားတွေမှာ တွေ့ရများပါတယ်။
သွေးလေးဘက်နာကို အသက် ၄၀-၅၀ နှစ်ကြား အမျိုးသားတွေမှာ တွေ့ရများပါတယ်။
အရိုးရဲ့အပြင်လွှာဟာ ပထမဆုံးရောဂါစဖြစ်တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ ထို့နောက် ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ အရိုးတစ်ခုလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားကြပါတယ်။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်က သွေးလေးဖက်နာ အဆစ်ရောင်ရောဂါဖြစ်နေပြီဆိုရင် သူဟာအဆစ်တွေ ပုံစံပြောင်းခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အရိုးများနှင့် အရိုးနုများကို ကျိုးပဲ့စေနိုင်တယ်။ ရောဂါပြင်းထန်လာလျှင် တခြားတစ်ရှူးများနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အဆစ်ရောင်ရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ သင်ဟာ ပြင်းထန်သောလှုပ်ရှားမှု တစ်ခုခုကြောင့် အဆစ်တွင် ဒဏ်ရာရဖူးပါက သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်ရောက်သောအခါ အဆစ်ရောင်ရောဂါကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဝလွန်နေတဲ့ လူတွေမှာ ကြွက်သား၊ အဆီနှင့်အရည်ပမာဏအများအပြားကို သယ်ဆောင်ထားရသောကြောင့် သင့်အဆစ်တွေပေါ်ဖိအားသက်ရောက်မှုဖြစ်စေပြီး အဆစ်ရောင်ရောဂါ ရစေနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓါကိုယ်တွင်းကို အသေးစိတ်ရိုက်သည့် ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် (CT) သည် အတွင်းရှိ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးရိုက်ပေးကာ တိကျသောအဖြေတွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ CT scan သည် အရိုးနှင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တစ်ရှူးတွေကိုပါ မြင်ရစေနိုင်ပါတယ်။
Arthritis http://www.healthline.com/health/arthritis#Overview1. Accessed July 20, 2016.
Arthritis http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arthritis/symptoms- causes/dxc-20168905. Accessed July 20,2016.
Arthritis http://www.nhs.uk/conditions/arthritis/Pages/Introduction.aspx. Accessed July 20, 2016.Arthritis http://www.healthline.com/health/arthritis#Overview1. Accessed July 20, 2016.
Arthritis http://www.nhs.uk/conditions/arthritis/Pages/Introduction.aspx. Accessed July 20, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 18, 2017